पुन: सुरुवातमा तपाईंको व्यावसायिक गुणहरू कसरी वर्णन गर्नुहोस्
पुन: लेखन लेखन नौकरी खोजको अभिन्न भाग हो, त्यसैले यसले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। CV मा "व्यावसायिक कुञ्जी" भनिन्छ एक सम्पूर्ण खण्ड हो, तर पुन: सुरुमा तपाईंको व्यावसायिक गुणहरू कसरी वर्णन गर्न सही छ? त्यहाँ केही नियमहरू छन्, जसको पालन गर्दै, तपाईं आफ्नो बललाई जोड दिन सक्नुहुन्छ र गल्ती गर्ने नसक्ने क्षमता हो जुन सम्भावित नियोक्तालाई अलग गर्नेछ।
यो नियमहरूलाई एक चरण-दर निर्देशनको रूपमा विचार गर्नुहोस्:
सेक्सनहरू "व्यावसायिक उपलब्धिहरू" र "व्यावसायिक क्षमताहरू" लाई भ्रमित नगर्नुहोस्। पहिला तपाईंले समान स्थितिमा अघिल्लो कामहरूमा के हासिल गर्नुभयो भनेर संकेत गर्दछ, र दोस्रोमा - यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कुन गुणहरूले मदत गर्यो। यो, एक तरिका मा, आफ्नो व्यावसायिक सेवा विज्ञापन।
हामी कम्प्यूटरीकरणको उमेरमा बाँचिरहेका छौं, त्यसैले कीवर्ड र वाक्यांशहरूलाई बेवास्ता गर्दैनौं। कार्मिक प्रायः प्रायः स्वचालित खोजी प्रणाली प्रयोग गर्दछ, जुन कुञ्जी वाक्यांशहरूमा आधारित छ। उनीहरूलाई यी गुणहरू विचार गर्न सकिन्छ कि यस पदको लागि उम्मेदवारी हुनु पर्छ।
पुन: सुरुवातमा पेशेवर गुणहरू सूचीबद्ध गर्दै, तपाईंले स्क्याटर र स्वामित्व पाउनुहुने सम्पूर्ण क्षमताहरू सूचीबद्ध गर्नुपर्दैन। मुख्य कुरा मा ध्यान दिनुहोस् - यस विशेष खाली रिक्तिको लागि आवश्यक गुणहरूमा। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ विभागको टाउकोको लागि आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो प्रभावकारी समाधान र सहनशीलता पाउनको लागि एक टोलीमा काम गर्ने क्षमताको इशारा गर्न योग्य छ।
सबै कुराको रूपमा, पुन: सुरुवात गरी "सुनको अर्थको नियम" पालन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। पुन: सुरुवातमा तपाईंको व्यावसायिक गुणहरू लामो सामान्य वाक्यांशहरू द्वारा वर्णन गरिनु हुँदैन। तर, एकै समयमा, एक वा दुई शब्दहरू पर्याप्त हुनेछैनन्। एक दोहोरो वाक्यहरू लेख्नुहोस् जुन पुनः सुरुवातमा पेशेवर गुणहरू वर्णन गर्नुहोस्। उदाहरण: "मुख्य लेखाकारको रूपमा आठ वर्षको काम", "1C कार्यक्रमको ज्ञान, भूखण्डहरू: बैंक, नगद, निपटान खाता"। केहि आधारभूत कौशलहरू सूचीबद्ध गर्न निश्चित हुनुहोस्। यो आवश्यक छ, ताकि CV औपचारिक विशेषसँग मेल खान्छ र आवेदक को आवश्यकताहरु पूरा गर्दछ।
यसलाई क्लिचेसको साथ ओभरमा नगर्नुहोस्। तपाईंको व्यक्तिगत विशेषताहरू प्रतिबिम्बित ढाँचात्मक शब्दहरूको बहुतायत लगभग सारा सारांशमा उपस्थित छ, र जलन को कुनै पनि कुरा छैन। नियोक्ताले तपाईलाई इशारा गर्नु पर्छ पेशेवर कौशल र तपाईले सूचीबद्ध उपलब्धिहरु बाट।
यदि तपाई कम्पनी द्वारा जारी लिटरहेड को सट्टा एक मुक्त फारम मा पुन: सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने, पाठ संरचना कोसिस गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। पुन: सुरुवातमा व्यावसायिक गुणहरू संक्षिप्त रूपमा संकेत गरिएको हुनुपर्छ, उदाहरणका लागि: पीसी (उन्नत प्रयोगकर्ता), फ्रांसीसी (मैले पढ्न र शब्दकोश शब्दकोश सँग अनुवाद गर्छु)।
ध्यान दिनुहोस् कि सारांश केवल सच्चा डेटा लेख्नु पर्छ, रमाईलो थोरै अप्ठेरो पार्नु र कमजोर पेशेवर गुणहरूलाई कम गर्नु पर्छ। सारांशमा, यो संदिग्ध उठाउनेछैन र यो ठुलो देखिन्छ। आफैलाई प्रशंसा नदिनुहोस् र यदि तपाईंले केहि गुणहरू उल्लेख गर्नुभएको छ भने तपाईले वास्तवमा विकास गर्न प्रयास गर्नुहोला, अन्यथा अनुभवी मानव संसाधन अधिकारीले धोका व्यक्त गर्नुहुनेछ, र तपाईंलाई आफ्नो स्थितिको असंगताको कारणले इस्तीफा दिनुपर्छ।
को सार मा प्रकृति को तागत सूची - सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छैन?
नमूना CV storekeeper सुझाव आवेदक
Gardnerella: यो के हो र के खतरनाक छ?
जीवनको लागि कलोनीको प्रतीकको रूपमा कालो डल्फिन
कारण र उपचार: को मसूडों मा अल्सर
केही माउस क्लिक मा टन खाता विवरण